व्यावसायिक सम्वन्ध महासंघ सँग कि मिडिया हाउससँग ? – Hamropahuch
बिभिन्न कालखण्डमा बिभिन्न आयमहरु देखा पदै आएका छन् । अधिकांश कुरा थाहा नपाएर भएका छन् भने केही थाहा पाएर पनि विधि मिल्चे काम हुँदै आएका छन् । अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर गरिने अनेक क्रियाकलापले व्यक्तिमात्र होइन ,संस्थाको गरिमा नै घटने गर्दछ ।
अहिले हामीले लेखेका ,गरेका कामको मुल्याकंन हामी भन्दा भारी वुझने पाठकले हामीलाइ गल्ती औल्याएर खवरदारी मात्र होइन, आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा जिस्क्याइरहेका हुन्छन् । हामी भने बल मिच्याइले संसार कब्जा गर्न खोज्छौँ त्यो पनि बिधि बाहिर गएर । जाजरकोट सानो जिल्ला हो तर भौगोलिक रुपमा विकटताका कारण सानो भएपनि यहाँ भएका हरेक गतिविधि ठाउँ पाउन केही समय लाग्छ ।
जटिल एवं समस्या भएपनि यसलाइ अहिले सम्मा अनेक उपायद्धारा सूचना दिने र जानकारीको अधिकार स्थापित गर्न पत्रकारहरु सफलै भएका छन् भन्ने लाग्छ । तर सर्वसाधारणले कति जानकारी पाउनु पथ्यो र हामीले दिनुपर्नेपथ्यो त्यो छुट्टै बहसको कुरा छ । हामीले सञ्चालन गरेका मिडिया मार्फत दिएका जानकारीले अमेरिका बस्ने वा प्राविधिसँग टच भएको व्यक्तिगत एकै छिनमा थाहा हुन्छ तर हाम्रो गाउँमा संञ्चारको खासै विकास नभएको ठाउँमा थाहा पाउन केही दिन सम्मा लाग्न सक्छ ।
यि कुराहरु समयसँगै हल हुँदै जानेछन् । मुख्य कुरा भनेको हाम्रो मानसिकता भने बदलिन जरुरी छ । सूचना पाउनु सर्वसाधारणको संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार हो । सूचना जनताको पहुँचमा जान नदिने र अवरोध गर्ने कुरा जनताको थाहा पाउने अधिकार माथी प्रतिबन्ध लगाएको जस्तै हो । जिल्लामा आधा दर्जन अनलाइन , तीन वटा रेडियो छन् ।
छिमेकी जिल्लामा हाम्रो भन्दा अलि बढी मिडिया हावस छन् । हामीले चलाएका अनलाइन मिडियाको पहुँच इन्टरनेटको पहुँच हुने ठाउँ सम्मा रहेको छ भने रेडियोको कभरेज यसका तरंग कहाँ कहाँ पुग्छ त्यही सम्मा पुग्छ । अनलाइन जस्तो जहाँ पछि हेर्न सकिने वा इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा गएर पुर्ण हेर्न सकिने काम रेडियोमा हुँदैन । रेडियो सुन्नका लागि यसका खास क्षेत्रमा मात्र रेडियोको कभरेज हुने गर्दछ । तर अनलाइनको लागि खास क्षेत्र भन्ने हुँदैन ।
इन्टरनेटको पहुँच हुने ठाउँमा जहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ , जाजरकोट शाखाले विज्ञापन वितरण गर्नका लागि महासंघका अध्यक्ष तथा रेडियो पाइलाका प्रवन्धकसँग सम्पर्क गरेर मात्र सूचना दिन आग्रह गदै सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट लेखेको देखिन्छ । खासमा पत्रकार महासंघको कुन बुद्धामा विज्ञापन महासंघले उठाएर वितरण गर्ने भन्ने उल्लेख छ त , मैले आमसञ्जाल र पत्रकारिताका मास्टर पुरा गरिसक्दाको प्रश्न हो यो ? म पनि एक पटक सचिव ,दुइ पटक कोषाध्यक्ष हुँदा समेत पत्रकार महासंघले विज्ञापन उठाउने र वितरण गर्ने भन्ने जानकारी कत्तै पढ्नु परेन । यस्ता अधिकांश क्षेत्र भन्दा भन्दा बाहिर गएर गरिने गलत क्रियकलापले गर्दा महासंघको उचाइ तथा गरिमा घट्ने गर्दछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ , केन्द्रीय समितिले जारी गरेको उदेश्य
नेपाल पत्रकार महासंघ सम्पूर्ण नेपाली पत्रकारहरुको साझा छाता संगठन हो जसको ६५ वर्ष लामो इतिहास छ । देश विदेशमा रहेका नेपाली पत्रकारहरुलाई संगठित गर्दै व्यावसायीक नेतृत्व प्रदान गर्ने र श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहित रक्षा गर्दै सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्नु महासंघको मूल ध्येय, लक्ष्य र दायित्व हो ।
त्यसका लागि महासंघले नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षबाट प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा र प्रवर्दन गर्ने, पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि काम गर्ने, र पत्रकारिता तथा सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा संघ संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
यसका साथै देशमा भएका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुको एक अंगका रुपमा महासंघ सधैं उभिएको छ । लोकतान्त्रलाई सुदृढ गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्नु र मानव अधिकारको रक्षा गर्नु महासंघको उद्देश्य हो ।
वि.सं. २०१२ चैत १६ गते गठन भएको नेपाल पत्रकार संघको निरन्तरताका रुपमा महासंघ रहेको छ । वि.सं. २०५३ जेठ २९ मा संघलाई महासंघमा रुपान्तरण गरिएको हो ।
नेपाली पत्रकारहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्दै उनीहरूको हक अधिकार प्रवर्दन तथा संरक्षण गर्न क्रियाशील रहन ।
उत्तरदायी, मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताको संस्थागत विकासमा क्रियाशील हुँदै स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मर्म, मान्यता, आचरण र आदर्शलाई परिपालना गर्ने,
सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा क्रियाशील रहने,
श्रमजीवी पत्रकारहरुको उचित श्रम अभ्यास, सामूहिक सौदावाजी र पेशा तथा रोजगारीको अधिकारको संरक्षणका लागि पत्रकार महासंघलाई
ट्रेड युनियन संस्थाका रुपमा स्थापित गरी ट्रेड युनियन अधिकारको नेतृत्व प्रदान गर्ने
पत्रकार तथा आमसञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक हकहित र भौतिक सुरक्षाका लागि सक्रिय रहने,
पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा विभिन्न देशका संघ, संस्थाहरूसँग प्रतिनिधिहरू आदानप्रदान गर्ने,
पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बैठक, भेला, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, प्रशिक्षणलगायत अन्य विभिन्न रचनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने र पुस्तक, पत्रपत्रिका, कार्यक्रम तथा प्रतिवेदन प्रकाशन वा उत्पादन गर्ने,
राष्ट्र, समाज र आम नागरिक तथा पत्रकार जगतको हितका साथै स्वच्छ पत्रकारिताको प्रवद्र्धनका निम्ति क्रियाशील रहने,
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक अन्य काम गर्ने ।
यि माथी उल्लेख बुद्धामा रहेर हामीले पत्रकारको हक हितको पक्षमा लागि काम गर्ने हो ने महासंघलाइ थप उचाइमा लिन सकिन्छ । होइन भने व्यक्तिगत कम्पनीको रुपमा स्थापित गरी कमाइ खाने भाँडोको रुपमा मात्र यसको नाम सूचिकृत हुन सक्छ । महासंघ आफैमा केही होइन यसका पछाडी संघ,संगठनको बल र एकताबाट आर्जित बलबाट महासंघ महासंघको रुपमा स्थापित हुन सकेको हो ।
यो पद सधैँ टाँसीरहने पद पनि होइन , निश्चित समय सम्मा त्यसमा बस्ने र पछि अकैले त्यो पद बैद्यानिक विधिबाट ओगट्न सक्छन् । महासंघले विज्ञापन यो ठाउँमा देउ अथवा मलाइ देउ , म वितरण गर्छु भन्नु गैरकानुनी हो । केही निकम्म कार्यालय प्रमुखहरु त्यही आफ्ना विचार मिल्नेको आर्शिवाद लिएर राजनीतिक स्वार्थपूर्ती गर्न लाग्नछन् भने त्यो पनि गैरकानुनी हकत हो ।
आफ्नो कार्यालयबाट कस्तो सेवा पाइन्छ त्यहाँ ध्यान दिनु कार्यालय प्रमुखको काम हो तर यहाँ त कसरी आफ्नालाइ रिजाउन सकिन्छ भन्ने ध्यानबाट मानसिकता विकास हुँदा आफूपनि बिवादमा अरु पनि बिवादमा आउने बाहेक अरु केही नयाँ कुरा छैन । विज्ञापन , सूचना दिने र लिने अधिकार मिडिया हाउससँग हुन्छ तर पत्रकार महासंघसँग हुँदैन । मिडिया हाउसका आफ्नै खालका दर रेट हुन्छन् । विज्ञापनकै काम गर्ने भनि विज्ञापन एजेन्सी समेत वैद्यानिक रुपमा खोलिएका हुन्छन् । त्यस्ता एजेन्सी वैद्यानिक रुपमा सूचिकृत समेत गरिएको हुन्छ ।